News Collection: नेपालको बारेमा के के पोल खुल्दैछ?
नेपालको बारेमा के के पोल खुल्दैछ?
विकिलिक्स साइटले अहिले तहल्का मच्चाइरहेको छ विश्वभर। विश्वभर रहेका २७४ वटा अमेरिकी दूतावासले सन् १९६६ देखि सन् २०१० सम्म वासिङटनमा रहेको विदेश मन्त्रालयमामा पठाएका गोप्य मेमोहरु विकिलिक्सले हात पारेको हो। सोमबार राति यो ब्लग लेख्दासम्म उसले हात पारेका साढे दुई लाखभन्दा बढी कागजातमध्ये २४३ वटा कागजात मात्रै सार्वजनिक गरेको छ। यति कागजात सार्वजनिक हुँदा नै विश्व हल्लिसकेको छ। बाँकीले के के गर्ने हो! हामी नेपालसम्बन्धी कागजातमा ध्यान दिनेछौँ। नेपालसम्बन्धी कागजातको पूर्ण विवरण त सार्वजनिक भइसकेको छैन तर के के विषयका र कुन मितिका कागजात सार्वजनिक हुन लागेका हुन्, त्यो भने थाहा भइसकेको छ। यसअघिको ब्लगमा केही पाठकले दरबार हत्याकान्ड र मदन भण्डारीको हत्याका विषयमा पनि केही पोल खुल्ने हो कि भनी कमेन्ट गरेका रहेछन्। के साँच्चै यसबारे पोल खुल्छ त ?
सार्वजनिक हुन लागेका कागजातमा सबैभन्दा पुरानो फेब्रुअरी १, २००२ को छ। त्यसैगरी सबैभन्दा नयाँ फेब्रुअरी २५, २०१० को छ।
यसको अर्थ हो दरबार हत्याकान्डका बेला अमेरिकी दूतावासले वासिङटनमा के खबर गर्‍यो, त्यो हामीले हेर्न पाउने छैनौँ। किनभने दरबार हत्याकान्ड सन् २००१ मा भएको हो। मदन भण्डारीको मृत्यु त त्योभन्दा धेरै अगाडि भएको।
तर पनि निराश नहुनुस्। नेपालसम्बन्धी २ हजार ६ सय कागजात सार्वजनिक हुँदैछ। तीमध्ये काठमाडौँस्थित अमेरिकी दूतावासले पठाएका २ हजार २ सय ७८ मेमोहरु छन्। त्यसमा पनि ८४ लाई अति गोप्यको दर्जा दिइएको छ। अनि १ हजार २ सय ९९ मेमो गोप्य हुन्। यसमा त्यस्ता गोप्य कुराहरु लुकेका छन्, जुन अहिलेसम्म कसैलाई थाहा थिएन।
सन् २००२ देखि २०१० सम्मका आठ वर्ष नेपालमा निकै उथलपुथल भएका वर्षहरु हुन्। यही समयमा माओवादी विद्रोह चरम सीमामा थियो। यही समयमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले कू गरे। यही समयमा भारतमा माओवादी र सात दलबीच १२ बूँदे समझदारी भयो, जसको तत्कालीन अमेरिकी राजदूत जेम्स एफ मोरिआर्टी खुब विरोध गर्थे। यही समयमा राजतन्त्र ढल्यो। यही समयमा माओवादीको सरकार बन्यो र यही समयमा ढल्यो।
के के विषयका कागजात सार्वजनिक हुँदैछ त?
नेपालसम्बन्धी कागजात सार्वजनिक नभए पनि के के विषयमा कागजातहरु छन् भन्ने सार्वजनिक भइसकेको छ। त्यसअनुसार अहिलेसम्म कसैलाई थाहा नभएको निम्न विषयका गोप्य कुरा सार्वजनिक हुँदैछन् (सार्वजनिक भएको ट्यागको आधारमा केही सूचि)-
भारतसँगको सम्बन्ध बारे
स‍ैन्य तथा रक्षा मामिला बारे
हतियार बिक्री तथा सहयोगबारे
आर्थिक सहयोगबारे (यसमा देशलाई मात्र हैन, कुनै व्यक्ति वा समूह वा दललाई गरेको सहयोग पनि आउन सक्छ)
नेपालको आन्तरिक राजनीतिका बारेमा अमेरिकाको दृष्टिकोण, अमेरिकाको जासुसी
नेपालका राजनीतिक पार्टीहरुको बारेमा अमेरिकाको दृष्टिकोण, अमेरिकाको जासुसी
नेपालको बाह्य राजनीतिक सम्बन्ध बारे
नेपाल सरकारको नीतिबारे
तिब्बती शरणार्थी बारे
भुटानी शरणार्थी बारे
के के सार्वजनिक हुनसक्छ ? (अनुमान)
यी कागजातहरु अहिले विकिलिक्स बाहेक विश्वका पाँच वटा पत्रिका Guardian, New York Times, Le Monde, El País and Der Spiegel सँग छ। विकिलिक्सले उनीहरुलाई एकै समयमा यी कागजात रिलिज गर्न भनेको छ। त्यसैले उनीहरुबाहेक कसैलाई यी कागजातमा के के कुरा छन् भन्ने थाहा छैन। तैपनि के के हुनसक्छ, केही अनुमान-
अफगानिस्तानको सार्वजनिक भएको एउटा डकुमेन्टमा राष्ट्रपति हमिद कारजाइका भाइसितको भेटमा उनले गरेका कुरा, उनको आशय, उनले ‘हामी (अमेरिका)ले थाहा नपाएजस्तो गरी लुकाएको कुरा जस्ता विवरण दिइएका छन्। साथमा उनलाई अझै बढी निगरानी गर्नुपर्ने जस्ता कुरा पनि लेखिएका छन्। नेपालका राजदूतले पनि धेरैलाई भेट्छन्। प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, केपी ओली, स्वर्गीय भइसकेका गिरिजाप्रसाद कोइराला, शेरबहादुर देउवा आदि नेतासँगको भेटमा उनीहरुले के के कुरा गरे, अमेरिकाले के के भन्यो आदि सार्वजनिक हुनसक्छ।
नेताहरुको कुरा सार्वजनिक भएमा त उनीहरुलाई खासै केही वास्ता नहोला, यसै पनि नेताहरु नाङ्गिएकै छन्। तर सबभन्दा बढी असर अमेरिकाले कुनै मिडियालाई, पत्रकारलाई, कुनै समूह वा पार्टीलाई कुनै व्यक्तिलाई पैसा खुवाएर केही काम गर्न खोजेको भए त्यो सार्वजनिक हुँदा हलचल मच्चिन सक्छ।
India Relations ट्यागमा पनि धेरै कागजात रहेकाले भारतले नेपालमा गरेको हस्तक्षेप अनि त्यसमा अमेरिकी जासुसी बारे पनि कागजात सार्वजनिक हुनसक्छ। १२ बूँदे समझदारी भारतमा भएको ताका तत्कालीन अमेरिकी राजदूत जेम्स एफ मोरियार्टीले निकै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए। यससम्बन्धमा काठमाडौँ दूतावासले वासिङटनलाई गरेका रिपोर्टिङ पनि पढ्न लायकका हुनेछन्।
कूटनीतिक सम्बन्ध बिगार्न सक्ने दस्तावेज तिब्बती शरणार्थीको बारेमा हुनसक्छ। अमेरिकाले के के खेल खेल्यो अनि नेपालका कुन कुन नेताले त्यसलाई साथ दिए भन्ने खुलासा चीनलाई बिच्काउने खालको हुनसक्छ।
नेपालमा अमेरिकाको जासुसी कुन हदसम्म छ भन्ने यी कागजातले स्पष्ट पार्नेछ।
काठमाडौँस्थित अमेरिकी दूतावासले कुन कुन विषयमा कागजात सार्वजनिक गर्दैछ, थाहा पाउन तलको लिङ्कमा क्लिक गर्नुस्। त्यसमा गएर Filter मा Address र अर्कोमा Contains छान्नुस् र नजिकैको अर्को बक्समा Kathmandu टाइप गरेर तल Apply थिच्नुस्। यसमा भएका ट्यागको पूरा अर्थ बुझ्न यहाँ क्लिक गर्नुस्
विकिलिक्सको सार्वजनिक गरिने सबै कागजातको मिति र शीर्षक थाहा पाउन क्लिक गर्नुस्-